PARIS: WAQTIGA WAX SOO SAARAY, NEYMAR WAXAY KALA JOOJINAYAA - TELESAYNAYA
ACCUEIL » SPORTS PARIS: WAQTIGA WAQTIGA UGU DANBEEYAY, NEYMAR WAXAY YIHIIN
Neymar kaliya kuma soo laaban tababarka PSG isbuucaan. Waxa uu sidoo kale xiray mustaqbalkiisa, codkiisa aabihiis.
Khamiistii, Paris Saint-Germain ayaa heshay Neymar. Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa ka maqnaa garoonka tababarka tan iyo dhamaadkii bishii Janaayo, waxaana uu jabsaday jabkii shanaad ee tartanka, isagoo dib u bilaabay tababar wadajir ah ciyaartoydiisa. Kulankan ayaa ku dhamaaday isagoo dhoolacadeynaya, taas oo u muuqata inuu cadeeyay in ciyaaryahankii hore ee Barca uu noqon doono finalka Coupe de France labo isbuuc, sida ay rajeynayaan Thomas Tuchel iyo shaqaalaha kale ee farsamada. Laakiin taageerayaasha Paris, waxaa xitaa ka fiican sidii ay ugu soo laaban laheyd Neymar Camp at Camp des Loges. Wareysi uu la yeeshay RMC-da ayaa la baahin doonaa habeenimadii jimcaha, aabaha xiddiga reer Brazil ayaa soo jiitay mustaqbalka wiilkiisa. Neymar wuxuu ku dhawaaqay inuu racfaan ka qaadan doono taageerayaasha PSG.
"TALOOYIN KU SAABSAN HESHIISKII LAGU QAATO"
"Taageerayaasha waxaay ku seexan karaan labadooda dhegood: maanta Neymar ma doonayo inuu ka tago PSG, wuxuu doonayaa inuu sii wato PSG, inuu helo booska, wuxuu ka caawin karaa kooxda inay koobab ku guuleystaan" wakiilka lambarka Paris 10. Si kastaba ha ahaatee, isbuucyadii u danbeysay (iyo gaar ahaan tan iyo markii laga reebay tartanka Champions League), wararka xanta ah ee ay Neymar ka fogeynayaan Paris ayaa dib u bilaabay. Iyadoo gaar ahaan soo jiidashada Spain. "Xaqiiqooyinka ka baxaya mar walba waa ay jiri doonaan, ma heysan karno ciyaaryahan sida Neymar oo aan dadka loola dhaqmin, kooxdana waxa ay ku riyooneysaa" ayuu ku jawaabay Neymar Senior. Dhawr toddobaadyo ka dib markii lagu xaqiijiyey Kylian Mbappé, halkan waa guusha mustaqbalka ee Faransiiska ku kalsoon tahay xiddigiisii ​​kale.
Qormo Isha: http://sports.tv5monde.com/neymar-ne-quittera-psg-this-is-single-pere-9052627.html